Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayo oo gaaray degmada Garbahaarey – idalenews.com
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayo oo gaaray degmada Garbahaarey
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon Saacid iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa goor dhow gaaray degmada Garbahaarey ee xarunta Gobolka Gedo, iyadoo booqashadan ay qeyb ka tahay kuwo uu ku kala bixinayay gobolada dalka.
Wafdiga Ra’iisul Wasaaraha oo saaka barqadii diyaarad Helicopter ah ka qaaday garoonka diyaaradaha Muqdisho ayaa waxaa si diiran loogu soo dhoweeyay magaalada Garbahaarey, iyadoo ammaanka aad loo adkeeyay.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa waxaa safarkiisa ku wehliya xubno ka tirsan Golihiisa wasiirada, Xildhibaano iyo saraakiil, waxaana la filayaa inuu la kulmo maamulka Gobolka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool gobolka.
Isgaarsiinta degmada Garabahaarey iyo deegaanada ku dhow dhow ayaa hawada laga saaray, markii wafdiga ay gaareen, waxaana la sheegay inay sababo ammaan ay tahay.
Degmada Garabahaarey ayaa ka mid aheyd deegaanadii ciidamada dowladda ay la wareegeen sanadkii 2011-dii, waxaana gobolka Gedo uu xilligan ka mid yahay degmooyinka ugu badan ee ay ciidamada dowladda gacanta ku hayaan.
Ra’iisul Wasaare Saacid ayaa taariikh u dhigay Ra’iisul Wasaarayaashii hore ee soo maray dalka 21-kii sano ee dalka dowlad la’aanta aheyd, isagoo mudadii uu xilka hayay uu booqasho ku tagay inta badan gobolada dalka, waxaa uu tagay degmada Afgooye, Marka, Kismaayo, Beledweyn, Dhuusa Mareeb, Caabudwaaq, Cadaado, Galkacyo, iyo Garowe.
Mr Saacid ayaa rikoorka safarada gudaha dalka ka qaaday Ra’iisul Wasaarihii hore Cali Maxamed Geeddi oo horay u tagay Beledweyn, Jowhar, Galkacyo, Garowe, Boosaaso iyo Baydhabo, inkastoo aan meelaha qaar uusan tagin.
Ra’iisul Wasaare Saacid ayaan tan iyo markii xilka loo magacaabay wax safar dibada ah ku tagin, iyadoo mudadan lixda bilood ee ay jirto Xukuumadiisa safaradii ugu badnaa ee dalka gudihiisa ku kala bixiyay, si uu ugu kuur galo xaalada ammaan, mid bulsho ee deegaanada uu booqday, waxaana uu ka duwan yahay madaxdii horay dalka soo martay oo marka loo eego socdaalkooda dibada ay aad u badnaayeen.
Booqashada Ra’iisul Wasaaraha ayaa loo arkaa is bedel siyaasadeed oo dowladda u qaadeyso arrimaha gudaha, isla markaana dadka deegaanka ay siineyso ahmiyad gaar ah oo ay codkooda ugu gudbin karaan madaxda sare wixii tabasho ay qabaan ama cadaalad daro.
Madaxweynaha Soomaaliya oo hambalyo u diray Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta
Baarlamaanka Soomaaliya oo si deg deg ah ugu yeeray Wasiirka Arrimaha gudaha iyo Amniga Qaranka